Ukuba ngaba impendulo EWE ukuba phantse zonke ezi imibuzo kwaye ufuna ukufumana umfazi kodwa ukuba akuqinisekanga ukuba bedeux kwenzelwa kuwe, ngoko ke ukufunda ubungqina bethu amalungu bedeux abathe zahlangana zabo umfazi ngokusebenzisa yethu”ndandidibana umfazi wam ubomi ukususela ngosuku lokuqala. Yakhe inkangeleko waziswa kum ngoko nangoko. Mna ke kuqala kancinci hesitate ukuthatha lokuqala kwaye ke wathi kum, ukuba mna musa ukuzama wam comment ngoku, ndiza ngokuqinisekileyo baya musa waphumelela. Ngoko ke mna wabhala kuqala abancinane myalezo kwaye mna wafumana kakhulu kamsinya nje kancinci kuqala impendulo. Siya kuqala exchanged ezimbalwa imiyalezo kwi-site bedeux kwaye kangaoko exchanged zethu email kwaye zethu inombolo yefowuni. Sithatha ixesha lethu kodwa ekugqibeleni kuyo yonke kwenzeka ngokukhawuleza kakhulu kunokuba sino kunye ekuqaleni ngcinga. Sino ekugqibeleni kwaye imibulelo bedeux ifunyenwe le incasa ubomi emva zethu divorces kwaye disappointments ngamnye kubo.”utshilo Francis.”Nangona hayi kakhulu enthusiastic ngomhla unye ka-kokudlula a dating club ukufumana umfazi yobomi bam, ndiya ekugqibeleni wabanyula enye uninzi kakuhle-ezaziwayo kuba nam ukuphepha engalunganga surprises. Emva ezimbini kuphela kwiiveki ndandidibana umfazi lowo ngoku izahlulo ubomi bam kwaye siyayazi ukuba elizayo ngowethu kwethu.”. Intlanganiso waba ngokukhawuleza, kwaye charm ka-Estelle ke isithethi (zam kakhulu), uthando lwethu lukhule ngokukhawuleza ezinjalo a ukuba siza ngoku Ufuna kakhulu unako ukufumana umfazi kwaye sixelele malunga yakho kwintlanganiso kunye umphefumlo wakho mate. I-personality uvavanyo yindlela entsha kwaye ke uyakwazi ukufumana zakho zilungile umfazi kuluhlu lwethu elicetyiswayo partners.
Sithatha qhagamshelana kwi mgqibelo ntsasa. Emva kokubhala ezimbalwa imiyalezo ye-kwiintsuku ezimbalwa, thina kugqitywe ukubona ngayo umntu. Mna ke nervous kodwa yonke into waya njengoko ndaba imagined. Thina yadibana bedeux yokugqibela ehlotyeni. Ndandicinga ukuba wayeya kufumana uthando kodwa oko kwenzeka. Sivuye kakhulu ngako oko ukuba zithe kwambatha indlela lomnye.
Mna kokuba sele balingwe ezinye zephondo kodwa ngaphandle impumelelo. Andiyenzanga kuba kakhulu kakhulu ithemba kum ukusayina egameni bedeux kodwa kamsinya ndandisele hooked xa ndabona personalized indlela ye-site. Wam uluhlu partners sele inikwa kum banqwenela ukungena uqhagamshelane kwaye abantu ukuba ndandidibana baba ngenene mnandi. Ndaye uvavanyo ngokudala i-inkangeleko kwi bedeux. Kungekudala waqala ukufumana inikezela ukusuka partners kwaye yiyo njani ndandidibana Sylvie.
Sivuye kakhulu ndonwabe kunye
Ndafumanisa wam namanani umntu, sonke share. Thina ndafunda ukwazi kwethu thatha, kwaye thina ingaba ebone kane phambi yethu yokuqala asazanga. Ubungqina bokuba internet ayikho necessarily a izifaniso kuba precipitation. Intlanganiso entsha abantu ayizange sele kunokuba lula nge-Intanethi. Kodwa into elungileyo kutheni ukuxoxa enyanisweni kunye dozens abantu ngaphandle ukwazi nokuba ngaba i-ukuthelekisa unxulumano ayikwazi ukwenza kunye nabo
← Njani Ukuqonda i-Aries Indoda Budlelwane
Ingaba a kubekho inkqubela get acquainted nge kubekho inkqubela →